နေတဲ့ဝန်းကျင်မှာ ပျော်မွေ့စေဖို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » နေတဲ့ဝန်းကျင်မှာ ပျော်မွေ့စေဖို့
Posted by manawphyulay on Jul 27, 2011 in My Dear Diary | 10 comments
ကျွန်မတို့ လူသားတွေ အားလုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသား၊ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့ ဦးနှောက်၊ ခံစားတတ်တဲ့ စိတ်နှလုံးသားတွေနဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျင်လည်နေကြရပါတယ်။ နံနက်မိုးလင်းမှာ မျက်စိနှစ်လုံး စဖွင့်ချိန်ကစလို့ ခန္ဓာကိုယ်သန့်စင်ရေး၊ စားရေးသောက်ရေး၊ အိမ်အလုပ်၊ ကျောင်းအလုပ်၊ ရုံးအလုပ်စပြီး ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုယ် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရပါတယ်။ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀မှာ အတူနေတဲ့ မိသားစု၊ အိမ်ထောင်စုဝင်တွေက အစပြုလို့ ကျင်လည်နေရတဲ့ နယ်ပယ်အလိုက် လူအများနဲ့ မဖြစ်မနေ ဆက်ဆံကြရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အလုပ်၊ ကျောင်း၊ မိသားစု တာဝန်ဝတ္တရားတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့် စိတ်ခံစားမှုအလိုက် စဉ်းစားတွေးခေါ် ပြောဆိုတာလေးတွေ ရှိတတ်တယ်။ လူကြီးသူမတွေကတော့ အိမ်က ပြဿနာ အလုပ်ထဲ မသယ်သွားနဲ့။ အလုပ်က ပြဿနာ အိမ်မသယ်လာနဲ့ လို့တောင် ဆိုစမှတ်ပြုကြပါရဲ့။ ရုံးထဲမှာလဲ ဒီနေ့တော့ ရာသီဥတု မသာယာဘူး ဆိုပြီး လူကြီးတွေရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို အချင်းချင်း သတိပေး ပြောတတ်ကြတယ်။ မိသားစုတွင်းမှာလဲ မိဘနဲ့ သားသမီး ဆက်ဆံရေးတွေမှာ ပြဿနာတွေ ခဏခဏ တက်တတ်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက် တွေအချင်းချင်း ရန်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း ကြည့်မရဖြစ်တယ်။ အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကနေ မခေါ်နိုင်၊ မပြောနိုင်တွေ ဖြစ်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာ ကောင်းမိကောင်းရက် ဆွေးနွေးနေရင်းက ထငြင်းကုန်တာရှိတာ။ စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ ခွန်းကြီးခွန်းငယ် တွေဖြစ်ကြ၊ ထချကုန်တာတွေလဲ ရှိတယ်။
ကိုယ့်စိတ်က အားငယ်နေတဲ့အချိန်၊ ရှုံးနိမ့်နေတယ်လို့ ထင်ချိန်မှာ ပြောရိုးပြောစဉ်အတိုင်း လူတစ်ဖက်သားက ပြောတာကိုလဲ ဆရာလုပ်တယ် ထင်တတ်တယ်။ ကိုယ့်စိတ်က ဘ၀မြင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဘက်လူက ကြည့်ရိုးကြည့်စဉ် ကြည့်တာကိုလဲ ကိုယ့်ကို စော်ကားနေတယ်လို့ ထင်တတ်တယ်။ လူတစ်ယောက်ကို အနုတ်လက္ခဏာကနေ ကြည့်မိပြီးရင် အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်လာဖို့ကလဲ တော်တော်ခဲယဉ်းပြန်ရော။
အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ ကြည့်မိရင်လဲ ဘာလုပ်လုပ်ကောင်းနေပြန်ရော။ လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ၊ ပြုမူဆောင်ရွက်ပုံတွေက လေ့လာလေ၊ နက်နဲလေ။ မိမိကိုယ်ကို လေ့လာကြည့်ကြရင်တောင် အတော်နက်နဲတဲ့ ကိစ္စ။ တစ်ခါတလေ ဒေါသထွက်သွားမိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို သွေးအေးချိန်မှာ ဘာကြောင့် ထွက်သွားရတာလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ သွေးဆူချိန်မှာလောက် ဒေါသဖြစ်စရာ မကောင်းတော့တာတွေ လူတိုင်း ကြုံဖူးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်မတို့လူသားတွေဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းပဲ အပူအပင်ကင်းနိုင်သမျှ ကင်းကင်း နေတော့မယ်လို့ ယတိပြတ် မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးစဉ်ကာလတစ်ခုအထိမှာ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ နေထိုင်နေကြရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မဟာ ပင်ကိုသဘာဝအရ စိတ်အတော်ဆတ်တဲ့ လူပါ။ နီးစပ်တဲ့ လူအများက စိတ်ရှည်တယ်၊ သည်းခံတတ်တယ် ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
ကျွန်မသည်းမခံနိုင်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေ တချို့ကလဲ ရှိတတ်တယ်။ တချို့ကိစ္စတွေကျတော့ သည်းခံလိုက်ရင်၊ ငြိမ်နေရင် ပြီးပေမယ့် တချို့ကိစ္စတွေကျတော့လဲ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းလိုက်မှ ပြီးနိုင်တာတွေကလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်မယ်ထင်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ တုန့်ပြန်မိတာတွေလဲ ရှိတတ်ပါရဲ့။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသက်အရွယ်၊ အခြေအနေတစ်ခု ရောက်လာချိန်ကျတော့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး နားလည်မှု၊ သည်းခံမှု စတဲ့အရာတွေသာ မရှိခဲ့ရင် ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာလည်း အားလုံးဟာ မိတ်ဆွေဆိုတာ မရှိပဲ ရန်သူတွေပဲ ပိုများပြားလာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တွေ့နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောရရင်တော့ နားလည်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးက အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်အလွန်ခက်တဲ့ ကိစ္စပါ။ မိဘနဲ့ သားသမီးအကြား၊ ဆွေမျိုးသားချင်းအကြား၊ ငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတွေအကြားမှာတောင် နားလည်မှု လွဲမှားရာက ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာလေးတွေ ရှိတတ်တယ်ဆိုရင် သူစိမ်းသူမနဲ့ဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ နားလည်မှုဆိုတာက ချက်ချင်းရနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ အပြန်အလှန် နားလည်မှုရလာအောင် ကြိုးပမ်းယူရပါတယ်။ နားလည်မှုမရခင် ဆက်ဆံရေး ပြိုလဲသွားတာလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံး နားလည်လာအောင် ကြိုးစားချင်စိတ်လေးရှိဖို့ကတော့ လိုအပ်လှပါတယ်။ တစ်ဖက်သားက ကိုယ့်စိတ်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အပြောအဆို၊ အပြုအမူလေးတွေ ရှိလာရင် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ၊ သူပြုမူရတဲ့ အကြောင်းရင်း စတာတွေကို လေ့လာကြည့်ပြီးမှ တုန့်ပြန်သင့်တာကို တုန့်ပြန်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ သူ့နေရာကနေ တစ်ချက် ပြန်ဝင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာမျိုးပါ။ မလွယ်ပါ။ အလွန်ခက်လှပါတယ်။ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါတိုင်းမှာ ကျင့်သုံးလို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျင့်သုံးလို့ ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်လာမယ့်သူတွေ၊ မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးသူတွေကို ဆုံးရှုံးမှုနည်းမှာ အမှန်ပါပဲ။ အဖွဲ့နဲ့ အလုပ်လုပ်လာတဲ့အခါ ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် တစ်ဖွဲ့လုံး ထိခိုက်သွားမလားဆိုတဲ့အတွေးဟာ အတော်ကို တွေးသင့် စဉ်းစား ဆင်ခြင်သင့်တဲ့အပိုင်းပါပဲ။ ငါ သာတယ် သူ သာတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးထက် ဒီနေရာလေး တိုးတက်အောင် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်အောင် အဖက်ဖက်က ၀ိုင်းဝန်းရင်း ဖေးမမှ ရေရှည်ရပ်တည်ပြီး အောင်မြင်မှု ရမှာ အမှန်ပါ။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့က ဘာလုပ်ကြမလဲ ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ အားလုံးနဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆက်ဆံပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး နေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အဆင်ပြေပြီး နေထိုင်မှုဝန်းကျင်မှာလည်း ပျော်မွေ့လာမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တောက်ခံသွားပါတယ် မမ မနောဖြူလေးရေ
ကိုယ်ဘက်ကိုပဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ တဖက်စွန်းအမြဲလုပ်လို့မှမဖြစ်တာ
စိတ်ရှည်တယ် သည်းခံတယ်ဆိုတာက ပြောရတာ လွယ်သလောက် လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့က
ခက်ခဲပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေများ ကိုယ်က သည်းခံရက်နဲ့ လာလာဆွနေတဲ့သူက ရှိသေးတယ် ။
သူ့နေရာသူ လိုက်လျောညီထွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်အောင် ဆက်ဆံသွားမယ်
တစ်ဖက်တည်းမကြည့်ပဲ နှစ်ဖက်လုံးကို ကြည့်ပြီး ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားမယ်ဆိုရင်တော့
အဆင်ပြေတဲ့ ဆက်ဆံရေးလေးဖြစ်လာမှာပါ ……….
ဘ၀ မှာ နားလည်မှု ဆိုတာ အရေး ကြီး စွာ..လိုအပ်တယ် ။ ကိုယ့် ကို နားလည်မှု မပေးတဲ့ သူကိုတောင် ကိုယ်က နားလည်ပေးရမယ် တဲ့။ကျွန်တော့် ဖေဖေ ပြောဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့်လူငယ် ဆိုတော့……… အဲဒီ လိုစိတ်ကို ရ ဖို့ အတော် ကြိုးစားရဦးမယ် ။
ဒီစာမူလေးကို တော်တော် ကြိုက်ပါတယ် ။ လက်တွေ့ ကျကျ ရှင်း ပြ ပြောပြ ထားလို့။
တချို့ သူတွေကတော့ ညှိလို့ ကိုမရတာတွေ ..။ သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရတာ နဂါး အမောက်ကြီးလိုပဲ…။
ညှိ လို့ ကို မရဘူးလေ။ အဲဒီလို လူတွေက စာတွေ ဘာတွေ မဖတ်တဲ့ သူတွေထဲ မှာ ပိုရှိတယ် ထင်တယ် ။
ညှိလို့မရတော့လည်း တစ်နည်းတော့ ရှိတယ်သိလား။ ဥပက္ခာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးပေါ့နော်။ လူတွေလောကထဲရှိနေသရွေ့တော့ အရာရာတိုင်းတော့ ညှိလို့ရမယ်မထင်ဘူး။ စိတ်ဆိုတာက ကိုယ့်စိတ်သူ့စိတ် တူတာမှမဟုတ်တာနော်။ ဒီတော့ စိတ်ချင်းတူဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ ဒါကြောင့် လိုက်လျောညီစွာရှိဖို့နဲ့ နားလည်မှု ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်။
မမ မနောဖြူလေးကတော. အမှန်တွေကို ပြောပြသွားတာပဲ
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေကြားမှာ လူပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်ပြီး သင့်တင့်လျှောက်ပတ်အောင်နေဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး … ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတွေဆိုတာက တကယ့်ကို ကိုယ်ပေါ် စေတနာရှိတာထက် (ကိုယ့်အကျိုးကို လိုလားတာထက် ) ၊ သာပေါင်း ညာစားတွေက များပြီး ၊ ဆီလို အပေါက်ရှာ တင်းဖျင်းပြောချင်သူက များတာကိုး … ။ တစိမ်းတွေနဲ့ ပဲ နေနေ ၊ ဆွေမျိုးတွေ ကြားမှာပဲနေနေ …ရွှေရှိမှ အမျိုးတော် … ကိုယ့်ရှိမှ ကိုယ့်စားရမယ့်ခေတ်မို့ … သူတို့နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင်နေမယ့်အစား … ကိုယ့် လမ်းကိုလျှောက် (ကိုယ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေသူတွေ လက်တွဲလာလိမ့်မယ် ) ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ရှာဆိုလျှင် အခြေကျကျ အနေလှတဲ့ ဘ၀မျိုးပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲလို့တော့ ကျွန်မက ခံယူထားတယ် .. ။
သားအဖနှစ်ယောက်နဲ့ မြင်းလေးဝတ္တုထဲကလိုပေါ့ .. သားကစီးတော့ စီးပြန်ပြီ ၊ အဖေက စီးတော့စီးပြန်ပြီ … နှစ်ယောက်စလုံးမစီးတော့လည်း လူတွေပိန်းတယ်ဖြစ်သေး ..ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်ပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာ … တကယ့်ကို လွယ်တော့မလွယ်ဘူး … (ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အရောင်စုံအသွေးစုံး စိတ်ဓါတ်စုံရှိတာကြောင့်) ။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ့်အချိန်တွေမှာ … မိမိမိသားစုအတွက်ရော ၊ မိမိအတွက်ပါ ဘ၀ရပ်တည်ရေး ၊ စီးပွားရေးအတွက် … ဘယ်သူ့အကူညီမှ မပါပဲ ရပ်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစား သင့်တယ်လို့ ထင်ပါကြောင်း … ၀င်လျှာရှည်သွားပါတယ် အစ်မ မနောရေ ။
ဒါလည်း ဟုတ်နေတာပဲနော်။ သူ့ဘက်ကကြည့် လက်ဖမိုး ကိုယ့်ဘက်ကကြည့် လက်ဖ၀ါးဆိုသလိုပေါ့ ညီမလေးရယ်… အဲလိုလူတွေက ခုခေတ်မှာ များနေတယ်ညီမရေ…
ရေနစ်သူကို ၀ါးကူထိုးဆိုသလိုတွေလည်း ပေါတယ်လေ။
ကျမကြားဖူးတာတော့ လူတစ်ဦးဟာ သခင်နှစ်ဦးရဲ့အစေကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့ လူအားလုံးနဲ့တည့်အောင်ပေါင်းဖို့တော့ မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ ဒါပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ တည့်အောင်ပေါင်းရတာပေါ့လေ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကို စိတ်မညစ်စေဘူးဆိုရင် သူတို့ကလည်းကို့ယ်ကို စိတ်မညစ်စေဘူးလို့ကိုယ်ကခံယူထားတာပဲ
ဟုတ်ပါတယ်။ နီလေး ပြောတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ဝန်းကျင်မှာ ပျော်ရွှင်မှ အလုပ်လုပ်ရတာလည်း စိတ်ချမ်းမြေ့မှာလို့ မြင်မိတာပါပဲ။